China Polyester spandex waxay fidisaa balastarleyda mesh jacquard warshadeeyayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huasheng
Polyester spandex waxay fidisaa maro jacquard mesh balanbaalis ah
Qaab dhismeedka tolida
Kala bax wanaagsan.Taabasho jilicsan
Daawooyinka La heli karo
Qoyaanka qoyaanka, Ka-hortagga bakteeriyada, qaboojinta, dib loo warshadeeyay
Polyester-ka spandex wuxuu fidiyaa maro isku dhejis ah, maqaalkeena nambarka FTT-WB5927, waxaa lagu dhejiyay 92% polyester iyo 8% spandex.
Daboolka poliester-ka ee spandex wuxuu fidiyaa maro balanbaalisley ah oo leh qaab balanbaaliseed qurux badan.Waa dhar afar geesood ah oo fidsan oo leh taabashada jilicsan, taas oo ka dhigaysa dhar aad u badan oo lagu shaqeynayo.
Dharkan poliester spandex wuxuu fidiyaa dhar-xidhka balanbaalista waa neef oo ku habboon dharka isboortiga, xirashada firfircoon, dusha sare, nigisyada, iyo xirashada yoga iwm.
Si loo daboolo heerarka tayada adag ee macaamiisha, dharkan mesh-ka ah waxaa soo saara mashiinadayada wareegyada casriga ah ee casriga ah.Mashiinka tolida ee xaalad wanaagsan ayaa hubin doona tolida wanaagsan, barti wanaagsan, iyo muuqaal cad.Shaqaalaheenna khibradda leh ayaa si wanaagsan u daryeeli doona dharkan mesh-ka ah min greige mid ilaa mid dhammaystiran.Wax soo saarka dhammaan dharka mesh-ka ayaa raaci doona habab adag si loo qanciyo macaamiisheena ixtiraamka leh.
Huasheng wuxuu qaataa fiilooyinka tayada sare leh si loo hubiyo waxqabadka iyo tayada dharka jacquard-ka ee ka sarreeya heerarka warshadaha caalamiga ah.
Xakamaynta tayada adag si loo hubiyo in heerka isticmaalka dharka jacquard knit ka weyn yahay 95%.
Naqshad xooggan iyo koox farsamo oo khibrad sannado ah u leh dhar-dhamaadka sare, naqshadaynta, wax-soo-saarka, iyo suuq-geynta.
Huasheng waxa ay soo saartaa taxane cusub oo ah dharka jacquard bishiiba.
Huasheng waxay rabta inay sii waddo abuurista qiimaha ugu sarreeya ee macaamiisha.Kaliya maahan inaynu macaamiisheena siino maro jacquard-ka ah, laakiin sidoo kale waxaan siinaa adeeg iyo xal aad u fiican.
Iyada oo leh 16 sano oo waayo-aragnimo ah dharka jacquard, Huasheng waxay si xirfad leh ugu adeegtay macaamiisha 40 ee adduunka oo dhan.
Qiimaha iibka tooska ah ee warshadda, qaybiye ma kasbado farqiga qiimaha.
Hore: Mélange waa la cadayday dharka Jersey
Xiga: Polyester spandex dalool maro kalluun isha mesh
Jacquard Maro Today
Jersey Jacquard Fabric
Dheeman yar oo dhaldhalaalaya oo polyester jacquard ah
Polyester iyo spandex jacquard madaw oo la neefsan karo...
Polyester iyo spandex jacquard maro tolan oo loogu talagalay ...
Iibinta kulul 100% polyester-ka-xidhka mesh-yar ee maro-yar
100% Polyester micro birdseye mesh mesh interlock fa...
87.8% Polyester iyo 12.2% spandex jacquard mesh